Windows 8/8.1 မှာ .NET Framework 4.5 အင်စတောလုပ်ပြီးသား ပါရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချို့Application တွေကို အင်စတောလုပ်ဖို့ အတွက် .NET Framework 3.5 လို Version အနိမ့်တွေ အင်စတောလုပ်ထားဖို့ လို ပါတယ်။Windows 8 မှာ .NET Framework 3.5 နဲ့သူ့ အနိမ့် Version တွေကို Enable လုပ်ပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။ထပ်ပြီးအင်စတောလုပ်လို့ မရပါဘူး။ဒီိဆောင်းပါးမှာ Enable လုပ်နိုင်မယ့် နည်းနှစ်နည်းကိုရေးပါမယ်။
ကွန်နက်ရှင်ရှိနေရင်တော့ ဒီနည်းကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ Windows 8 Search Box ကနေ Uninstallaprogram ကိုရှာပြီး ဖွင့်ပါ။
ပြီးရင် ညာဘက်က Turn Windows features on or off ကိုနှိပ်ပါ။
၀င်းဒိုး တစ်ခုပေါ်လာရင် ".NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0) " ဆိုတဲ့ Check Box တွေ မှာ အမှန်ခြစ်ပေးပါ။
Read more...6comment
Audio CD ခွေမှ သီချင်းတွေကို ကွန်ပျူတာထဲ ကူးယူနည်း
Audio CD သီချင်းတွေကို ကို ကွန်ပျူတာထဲသိမ်းတဲ့နည်းကို တစ်ချို့လူတွေက မလုပ်တတ်ကြပါဘူး။ Audio CD ကူတတ်သလားဆိုရင် မကူးတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကလည်း ကိုယ်နဲ့မရင်းနှီး တာတို့ ကိုယ်နဲ့မသတ်ဆိုင်လို့မလေ့လာတာ တွေလည်းပါပါတယ်။ CD Drive ထဲမှာရှိတယ် သီချင်းဖိုင်တွေကို Copy တို့ Send To တို့ လုပ်လို့မရပါဘူး။ ဒါကိုဘယ်လိုကူးမှာ လည်းလေ့လာ ကြည့်ကြရအောင်။
ကခဂဃင နှင့် ABCDE အက္ခရာ 10 လုံးကို တူရာလေးတွေရွေးပြီး ဆက်ပေးရတဲ့ Gmae apk
မူကြိုအရွယ် ကလေးငယ်များ၊3နှစ်4နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်များကစားနိုင်ပါတယ်။ ကခဂဃင နှင့် ABCDE အက္ခရာ 10 လုံးကို တူရာလေးတွေရွေးပြီး ဆက်ပေးရတဲ့ link-same Game ဖြစ်ပြီး android ဖုန်းမှာ ထည့်သွင်းကစားနိုင်ပါတယ်။ အက္ခရာအားလုံးဆက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လောက် အချိန်ကြာတယ်ဆိုတာကိုလည်း ဖော်ပြပေးပါတယ်။ က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င A. B. C. D စသင်တဲ့ ကလေးတွေအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ကလေးငယ်များကစားဖို့ ဖြစ်သည့်အတွက် အရောင်တောက်များ အသုံးပြုမထားပါဘူး။ ဒီဂိမ်းလေးအတွက် အသုံးပြုထားတဲ့ Software ရဲ့ နာမည်ကတော့ Android Link same Game Maker ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်သမီးလေး ကစားဖို့ စမ်းလုပ်ကြည့်ထားတာပါ (မြှောက်ပေးသူများ စိတ်ချမ်းသာစေရန်) ခုမှ အွန်လိုင်းပေါ်တင်ပေးဖြစ်တာပါ ပုံတွေတော့ အနည်းငယ်ပြောင်းထားလိုက်ပါတယ် အသုံးလိုတဲ့ မိတ်ဆွေများ ယူနိုင်ပါတယ်။
Download >>> Sharebeast
Download >>> Zippyshare
Download >>> Dropbox
ဖုန်းထဲက English စာလုံး​တွေကို သင့်​ဖုန်းကို Root လုပ်​ထားရုံဖြင့်​ ဒီဇိုင်းမျိုးစုံ ​ပြောင်းလဲ နိုင်​သည်​ အသုံးပြုပုံလွယ်​ကူပါသည်​
ဖုန်း​ပေါ် မှာ Appcation ​လေး​တွေကို မြန်​မာလို ​ရေးပြီးထားကြမယ်​
https://m.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdb.tt%2FTszw8E7H&h=kAQGBXDD4&s=1အားလုံးပဲကြိုက်​ကြမှာပာ ဒီ​ကောင်​​လေးကလန်းတယ်​ သုံးရတာလွယ်​တယ်​ဗျ
Sky King (ပြည်​)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ... ကွန်ပျူတာ မြန်ဆန်သွက်လက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ System Utilties တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ TuneUp ကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် .... ပြုလုပ်ပေးနိုင်တာတွေကတော့ Registry ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်နိုင်ခြင်း၊ Registry ကို စနစ်တကျ ဖြစ်အောင် Defragment လုပ်ပေးခြင်း၊ အသုံးမလိုတော့တဲ့ Shortcuts များကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ မလိုအပ်တော့တဲ့ temporary files များကို ဖျက်ပေးခြင်း၊ Hard disk ထဲမှာရှိတဲ့ ဖိုင်များကို စနစ်ကျ ပြန်စီပေးခြင်း စသည့် Tools များကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကွန်ပျူတာ မြန်ဆန်လာမှာဖြစ်ပါတယ် ... Home page ကိုနှိပ်ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ အသေးစိပ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်... လိုင်စင်အတွက် patch ပါဝင်ပြီး Sharebeast မှာ တင်ပေးထားပါတယ်။
Windows 8/8.1 မှာ .NET Framework 3.5 ကို Enable ပြ...
Audio CD ခွေမှ သီချင်းတွေကို ကွန်ပျူတာထဲ ကူးယူနည်း...
ကခဂဃင နှင့် ABCDE အက္ခရာ 10 လုံးကို တူရာလေးတွေရွေြး...
ဖုန်း​ပေါ် မှာ Appcation ​လေး​တွေကို မြန်​မာလိုေ...